စိတ်ဖိစီးမှုကို တိုက်ထုတ်ဖို့ နည်းလမ်းများ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
လူတိုင်းမှာ စိတ်ဖိစီးတွေ ရှိကြမှာပါ။ စိတ်ဖိစီးလာတဲ့အခါ အစားအသောက်တစ်ခုခု စားချင်စိတ်တွေလည်း ဖြစ်ပေါ်လာလေ့ရှိပါတယ်။ လူအများစုဟာ စိတ်ဖိစီးနေတဲ့အချိန်မှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ မသင့်တော်တဲ့ ပြည့်ဝဆီပါဝင်မှု သကြားပါဝင်မှုများတဲ့ မုန့်တွေ အစားအစာတွေကို ချင်ခြင်းတက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုအစားအသောက်တွေ စားတာဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကို ခဏသက်သာသလို ဖြစ်ပေမယ့်လို့ တကယ်တမ်းက မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ နေထိုင်စားသောက်မှသာ စိတ်ဖိစီးမှုကို တိုက်ထုတ်နိုင်မှာပါ။
>> စိတ်ဖိစီးမှုကြုံလာတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်က ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲ?
စိတ်ဖိစီးမှု ဒါမှမဟုတ် စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ ကြုံလာတဲ့အခါ အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းက အက်ဒရီနယ်လင်နဲ့ စတီးရွိုက်ဟော်မုန်းတွေကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်းတွေဟာ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ သွေးပေါင်တက်ခြင်း၊ အသက်ရှူမြန်ခြင်း စတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက် ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ဖိစီးတာဟာ ရေရှည်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အိပ်စက်မှုဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့ အစာခြေမှုဆိုင်ရာပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
>> တချို့သော အာဟာရဓာတ်တွေက စိတ်ဖိစီးမှုကို သက်သာစေနိုင်သလား?
လေ့လာချက်တွေအရ ဗီတာမင် C နဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုဟာ ဆက်စပ်မှုရှိနေတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအသောက်တွေ စားတာဟာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး စိတ်ကျရောဂါ ရှိနေသူတွေအတွက်ပါ အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝတဲ့ မာလကာသီး၊ ငရုတ်ပွ၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ လိမ္မော်သီး၊ နာနတ်သီး၊ သင်္ဘောသီး၊ ကိုက်လန်တို့ကို နေ့စဉ်အစားအသောက်ထဲမှာ ရွေးချယ်ထည့်သွင်း စားသောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
>> စိတ်ဖိစီးမှုကို ဘယ်လိုတိုက်ထုတ်ကြမလဲ?
● စိတ်ဖိစီးနေတဲ့အချိန်မှာ အစားအသောက်တစ်ခုခုကို ချင်ခြင်းတက်တယ်ဆိုရင် မိမိခန္ဓာကိုယ်အတွက်လည်း အကျိုးဖြစ်စေဖို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီး အာဟာရလည်းဖြစ်စေမယ့် အစားအသောက်တွေကို ရွေးစားပါ။ ကယ်လိုရီနည်းတဲ့ အစားအသောက်တွေကိုသာ စားပါ။
● နေ့စဉ် ပုံမှန် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။ တစ်နေ့ကို ငါးမိနစ်လောက်ပဲ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်တောင် စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
● စိတ်အပန်းပြေစေတဲ့ တရားထိုင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း စတာတွေ ပြုလုပ်ပေးပါ။
● စိတ်ဖိစီးနေချိန်မှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားပေးကူညီမှုရဖို့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိမိချစ်ခင်သူတွေနဲ့အတူ အချိန်ကုန်ဆုံးပါ။
● ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေဆီက အကူအညီရယူပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုဟာ ရေရှည်ဖြစ်နိုင်ပြီး အားအင်တွေကို ကုန်ဆုံးစေနိုင်လို့ လိုအပ်ခဲ့ရင် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးအကြံပေးသူဆီက အကူအညီတောင်းပြီး ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။